ဖန်စီဒိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖန်စီဒိုင်း (အင်္ဂလိပ်: Phencyclidine ) သည် ပတ်ဝန်းကျင်မှကင်းကွာစေသော စိတ်ကစင့်ကလျားဖြစ်စေသည့် ဆေးတမျိုးဖြစ်ပြီး စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးစာရင်းတွင် ပါသည်။  ဦးနှောက်ရှိ အာရုံကြောစနစ်ကို နှောင့်ယှက်ကာ ခံစားချက်၊ အမူအကျင့်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အားဆက်ဆံပုံတို့ကို ပုံမမှန်ဖြစ်စေသည်။  ဦးနှောက်မှထုတ်သော ဓါတုပစ္စည်းအချို့ကိုလည်း ပိတ်ပင်ကြောင်း ပညာရှင်တို့က ယူဆသည်။ တရားမဝင်ဆေးဝါးတမျိုးဖြစ်ပြီး ကုန်ကြမ်းသည် အဖြူရောင်အဖြစ် လာသည်။ ယင်းကို ရေ သို့တည်းမဟုတ် အရက်တွင် ရောကာ သုံးစွဲကြသည်။ အမှုန့်ကို နှာခေါင်းဖြင့် ရှူသွင်း၍၎င်း၊ မီးရှို့ကာ အငွေ့ရှူ၍၎င်း၊ လျက်၍၎င်း သုံးစွဲသည့်နည်းတူ ရေဖြင့်ဖျော်ကာ သွေးကြောထဲ ထိုး၍ သုံးတတ်သေးသည်။  ဆေးခြောက် သို့ ဆေးရွက်ကြီးတွင်ထည့်ကာ သောက်သည်လည်း ရှိ၏။ နတ်ဆေးမှုန့်၊ ငြိမ်ဆေး၊ ဒုံးပျံ၊ ကျား စသည့် လမ်းဘေးအမည်များ ရှိသည်။
ဆိုးကျိုးများမှာ နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း၊ ကိုမာ (coma) ဝင်ခြင်း၊ ဆေးစွဲခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်မည်ပြုသည်လည်း များ၏။ ဆေးဖြတ်ပါကလည်း နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ခံစားရသေးသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာများတွင် ထုံဆေး၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုတတ်သည်။
ဖန်စီဒိုင်းကို ၁၉၂၆ ခုတွင် စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ၁၉၅၀ ကာလများတွင် ထုံဆေးအဖြစ် သုံးခဲ့သည်။ အမေရိကန်၌ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခြင်းကြောင့် လူနာတို့တွင် အသုံးပြုခြင်းကို ၁၉၆၅ ခုမှစ၍ ပိတ်ပင်သည်။ တိရစ္ဆာန်တို့၌ သုံးခြင်းကို ၁၉၇၈ ခုမှစ၍ ခွင့်မပြုတော့။  ထို့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းသော ကတ္တမင်းကို တွေ့ရာ အစားထိုးစရာ ဖြစ်လာသည်။ ဖန်စီဒိုင်းမျိုးကွဲများကို အမေရိကန်၌ စိတ်ဖြေဆေးအတွက်၎င်း၊ ရောဂါအတွက်မဟုတ်သောဆေးအဖြစ်၎င်း ရောင်းချသုံးစွဲလျက် ရှိသည်။  ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကာယအားသုံးရသော အလုပ်သမားများအနေဖြင့် တနေ့တာပင်ပန်းမှု ပပျောက်စေရန် ဤဆေးကို သုံးစွဲတတ်သည်။ 
၁၉၉၁ ခုတွင် ဖြန့်သည့် မှားနေလား တိတ်ခွေစီးရီးတွင် စောဘွဲ့မှူးရေးသော သွားတော့ဖန်စီဒိုင်း ဟူသည့် သီချင်းမှာ လူသိများခဲ့သည်။  အိုင်းရွန်းခရော့အဖွဲ့သားများဖြစ်သည့် ခရစ္စတိုဖာ၊ လေးဖြူ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ ထိုသီချင်းကို ပြန်ဆိုဖူးသည်။
ဖန်စီဒိုင်းဟူသော ဝေါဟာရကို အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရမှ ယူသည်မဟုတ်။ ဈေးကွက်တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး အမည်ခံတံဆိပ် ဖန်စီဒိုင်း (Phensedyl) မှ ယူခြင်းဖြစ်သည်။
↑ "PCP Fast Facts Archived 14 August 2021 at the Wayback Machine.". National Drug Intelligence Center. 2003.
↑ Giannini AJ (1998). "Chapter 35: Phencyclidine". In Tarter RE, Ammerman R, Ott PJ (eds.). Handbook of Substance Abuse: Neurobehavioral Pharmacology. New York: Plenum Publishing Corporation. pp. 579–587.
↑ Bush DM (2013). "Emergency Department Visits Involving Phencyclidine (PCP)". The CBHSQ Report. Rockville (MD): Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US). PMID 27656747. PCP can lead to hostile behavior that may result in episodes of extreme violence
↑ "Hallucinogens". National Institute on Drug Abuse. January 2016.
↑ Substance use - phencyclidine (PCP). U.S. National Library of Medicine.
↑ Zedeck BE, Zedeck MS (2007). Forensic Pharmacology. Infobase Publishing. p. 97.
↑ Tasman A, Kay J, Lieberman JA, First MB, Riba M (2015). Psychiatry,2Volume Set. John Wiley & Sons. p. 4943.
↑ Morris H, Wallach J (2014). "From PCP to MXE:acomprehensive review of the non-medical use of dissociative drugs". Drug Testing and Analysis.6(7–8): 614–32.
↑ အောင်ထွန်းလင်း။ "ကျားစီးမလား၊ ငါးစီးမလား (သို့) ဖန်စီဒိုင်း"။ မြန်မာသံတော်ဆင့်။ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၆။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖန်စီဒိုင်း&oldid=727351" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။